Faah Faahin kasoo baxaysa cida la doonayay in lagu dilo qaraxii lagu weeraray Hotelka Maka Al-Mukarama(Sawiro)	| Salaan Media
Inta la xaqiijiyay qaraxii xalay loo adeegsaday gaadhi waxyaabah qarax laga soo buuxiyay ee ka dhacay afaafka hore ee Hoteka Maka Al-Mukarama waxaa ku dhintay ku dhawaad 10-qof halka ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 25-qof.
Ujeedka qaraxa xalay ka dhacay Hotelka Maka Al-Mukarama ayaa waxaa kasoo baxaya warar kala duwan, wararka qaar ayaa sheegaya in qarax lagu doonayay in lagu dilo Taliyaha Hay;ada Nabad Sugida Gobolka Banaadir Maxamed Aadan Jimcaale Koofi.
Taliyaha iyo Ciidamo lasocday ayaa Hotelka soo gaadhay qaraxa kahor kuwaa oo gacanta ku dhigay nin katirsan Al-Shabaab oo gudaha Hotelka ku jiray kaa oo ku fashilmay qarax lagu soo xidhay Laptob uu watay iyadoona xiligaas kadib laamaha amaanka lagu wargaliyay sidaana lagu qabtay ninkaasi.
Gaadhiga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo nuuciisu ahaa Runeed ayaa lagu dhuftay gaarigii uu watay Taliyaha Hay’ada Nabad ugida Gobolka Banaadir Maxamed Aadn Jimcaale Koofi, waxaana wararka sheegayaan in xiliga gaariga qarxayay in uu Taliyaha ku jiray gudaha Hotelka.
Qaraxii weynaa ee xalay ka dhacay afaafka hore ee Hotelka Maka Al-Mukarama ayaa u muuqday mid fashilmay oon laga gaadhin ujeedkii rasmiga ahaa ee laga lahaa , waxaana qaraxaasi ku dhintay ciidamo katirsan Dowlada iyo dad kale oo rayid ah oo goobta ka agdhawaa.